​एम्सको मिस्टर एण्ड मिस फ्रेसर उपाधि जोमन र प्रतिमालाई
न्यूजलय आइतबार १८, भदौ २०७४
इटहरी । धरानस्थित एम्स एकेडेमीअन्तरगत आयोजित चौथो मिस्टर एण्ड मिस फ्रेसरको उपाधि जोमन राइ र प्रतिमा राइले जितेका छन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबीच गरिएको प्रतिष्पर्धामा उनीहरुले उपाधि जितेका हुन् ।
एसइइ उतिर्ण भइ ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्रतिभा उजागार गर्ने साथै अवसर....
​दिनेश कोइराला अभिनित ‘मैले सुने तिम्रो खबर’को भिडियो सार्वजनिक
इटहरी । इटहरीबाट आफ्नो संगित तथा कलाकारिता यात्रा सुरु गरेका दिनेश कोइरालाको अभिनय रहेको ‘मैले सुने तिम्रो खबर’ बोलको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सागर क्षितिजको शब्दमा रहेको सो गितमा चर्चित गायिका मेलिना राइको स्वर रहेको छ । भिडियोलाई सरोज के.सी.ले निर्देशन गरेकाछन् ।
​विराटनगरमा घुम्नै पर्ने १० ठाउँ यस्ता छन् (भिडियो)
इटहरी । प्रदेश नम्बर १ को मुख्य शहरको रुपमा रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिकामा घुम्नै पर्ने १० स्थानको दृश्य समेटिएको ट्राभल भिडियो निर्माण भएको छ । विभिन्न ठाउँका पर्यटकिय स्थानहरुलाई समेटेर ट्राभल भिडियो बनाउँदै आएको इस्ट नेपाल टुर नामक युट्युब च्यानलले शनिबार विराटनगरको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ....
​भारतीय हाँस्य कलाकार सुनिल ग्रोबर अस्पताल भर्ना
न्यूजलय शनिबार १७, भदौ २०७४
डा. मसुर गुलाटिका नामले प्रसिद्ध भारतीय हाँस्य कलाकार सुनिल ग्रोबर अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
कपिल शर्मा सो बाट आफूलाई स्थापित गराएका उनी डेंगु भएपश्चात् एसियन हार्ट इन्स्टिच्युटमा भर्ना भएका हुन् । सुनिलले केही समयअघि विवादका कारण कपिल शर्मा सो छाडेका थिए । लगातार....
​यस्तो बन्यो ‘छक्का पञ्जा-२’ को पहिलो पोस्टर
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘छक्का पञ्जा-२’ को पोस्टर शुक्रबार फेसबुक मार्फत सार्वजनिक भएको छ । फिल्मका निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरीले आफ्नो फेसबुकबाट अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उक्त पोस्टरमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरु देखिन्छन् । चलचित्रमा दीपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का,....
नेपाल आइडल फेरि बिवादमा, पैसाको चलखेल रहेको आरोप
इटहरी । नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक गरिएको ठुलो गायन रियालिटी शो नेपाल आइडल फेरि विवादमा तानिएको छ । शुक्रबार भएको कार्यक्रममा चार मध्ये एक प्रतियोगी बाहिरिनु पर्ने हो । तर निर्णायकहरुले आफुहरुको शक्ति भन्दै यस पटक कोही आउट नहुने घोषणा गरे । छनौटको अन्तिम चरणमा....
को बाहिरियो आज नेपाल आइडलबाट ?
काठमाडौ । चर्चित टेलिभिजन रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ का शिर्ष चार प्रतिस्पर्धीले बिहिबार र शुक्रबार आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन् । शुक्रबारको इलिमिनेशन राउण्ड मा कोहि पनि प्रतिस्पर्धी बाहिरिएका छैनन् ।यो साता एक जना प्रतिष्पर्धी बाहिरिने भएपनि जजहरुले हस्तक्षेप गरेका हुन् । 'डिजर्भ गर्नेले नै जित्नु....
​इटहरीमा शनिबार अमेरिका–नेपाल साँस्कृतिक मेला
न्यूजलय शुक्रबार १६, भदौ २०७४
इटहरी । नेपाल–अमेरिकाको कुटनीतिक साइनो गाँसिएको ७० वर्षको अवसरमा इटहरीमा शनिबार साँस्कृतिक कार्यक्रम हुँदैछ ।
राजधानीबाहिर पोखरामा गरिएको यस्तो कार्यक्रम पूर्वमा इटहरीमा आयोजना हुँदैछ । अमेरिकी दूतावासले यसलाई सांस्कृतिक मेला नाम दिएको छ ।
संगीत साधना प्रतिष्ठानको स्थानीय संयोजनमा हुने उक्त सांस्कृतिक मेला....
'​ए मेरो हजुर २’ आजबाट देशभरी प्रदर्शन हुँदै
इटहरी । आज बाट ‘ए मेरो हजुर २’ देशभरी प्रदर्शन हुँदैछ । हिजो मात्र काठमाडौंमा गरिएको प्रिमियर शोमा राम्रै तारिफ पाएको थियो । बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ को चर्चा ब्यापक नै रहेको छ ।
छोटो समयमा फिल्मको ट्रेलर हेर्नेको संख्या....
​नाट्य निर्देशक सोनु जयन्ती बजाजको विज्ञापनमा
न्यूजलय बिहीबार १५, भदौ २०७४
इटहरी । इटहरीमा रहेर २ दशकदेखि नाट्य क्षेत्रमा लागेका सोनु जयन्ती दश वर्षदेखि संस्थागत रुपमै नाट्य क्षेत्रमा छन् । कलालय नामक नाट्य संस्थाबाट नाट्यकर्म गर्ने जयन्ती मूलतः नाटक कर्म नै गर्छन् । फाट्टफुट्ट केहि नेपाली चलचित्रमा पनि अभिनय गरेर चर्चा कमाएका जयन्ती अब बहुरास्ट्रिय बजाज....